Mailflow: Ampio Autoresponders ary ampandehano ny lisitry ny mailaka | Martech Zone
Ny iray amin'ireo orinasa dia nanana sehatra izay nitazomana mivantana ny fampiasan'ny mpanjifa ny fampiasan'izy ireo ilay sehatra. Raha tsorina, ireo mpanjifa nampiasa azy dia nahita fahombiazana lehibe. Niala ireo mpanjifa nitolona. Tsy fahita izany amin'ny vokatra na serivisy rehetra.
Vokatr'izany dia nanamboatra andian-mailaka marobe izahay izay nampianatra sy nanery ny mpanjifa hanomboka ny fampiasana ny sehatra. Nanome azy ireo horonantsary momba ny fomba ahoana koa izahay ary koa hevitra maromaro momba ny fampiasana azy. Hitanay avy hatrany ny fitomboan'ny fampiasana, izay nanjary valiny, izay nanjary nitazona ny mpanjifa tsara kokoa. Nataontsika automatique ho solosaina ny andiany raha vantany vao vonona ny lampihazon'ny mpanjifa ary nahavita fiofanana izy ireo.
Satria mandeha ho azy ny mailaka dia kely ny vola lany tamin'ny fampivoarana ilay programa. Na izany aza, raha tsy hoe te handany vola be amin'ny fotoana fampandrosoana izahay, dia tokony hatao ny fampidirana sy ny automatique izay nahatonga ny fandehan'ny mailaka tamin'ny alàlan'ny sehatra lehibe
Mailflow dia sehatra namboarina manokana ho an'ny mpampiasa farany hisintona sy handatsaka ny filaharan'ny mailaka ao anaty workflows.
Anisan'izany ny endri-javatra mailaka
automatique - Manamboara filaharana toy ny flowchart amin'ny tsindry vitsivitsy monja. Sariho maso ireo fampielezan-kevitra rehetra.
lasibatra - Atsaharo ny fieritreretana ireo fizarana ary manomboka mieritreritra momba ny tsirairay ianao mba hahafahan'ny hafatrao ho tena manokana.
fotoana - Alefaso ny fampielezan-kevitrao raha ny mpandray azy no mamaly azy indrindra, mihoatra ny ora andavan'andro ary mifototra amin'ny fihetsika tena izy.
WordPress - Ampifandraiso ao anatin'ny segondra vitsy ny tranonkalanao WordPress hamoronana endrika namboarina sy hametahana anarana ho an'ireo mpampiasa miorina amin'ny hetsika eo an-toerana.
Analytics - Aza miandry mandra-pahatapitry ny marina - zahao izay tena mandeha raha ny fahitana azy ary amboary ny fampielezan-kevitrao amin'ny sidina.
Integrations - Fenona API ary ny fanohanana amin'ny fananganana fampiraisana manokana. Plus maherin'ny 400 fampidirana azo atao amin'ny alàlan'ny Zapier.
Mombamomba ny mpandefa - Mitantana mpanjifa, fampielezan-kevitra ary mpandefa marobe, avy amin'ny kaonty iray ary miovaova ao anatin'ny fampielezana.
Tagging - Mianara bebe kokoa momba ny olona ao anatin'ny mpihaino anao mifototra amin'ny hetsika ataon'izy ireo amin'ny fampielezan-kevitra sy amin'ny Internet.
Timezones - Mametraha zana-potoana amin'ny ambaratonga eo an-toerana, mba hahafahanao mandefa ho azy ny fampielezan-kevitra tsirairay amin'ny fotoana mety amin'ny antoandro.
API feno - Mailflow dia namboarina avy amin'ny API izy. Ny serivisy iray manontolo dia miala amin'ny anay API ary ny anao koa afaka.
Tags: fampielezana dripmailaka analyticsmailaka apiautomation emailmailaka ho an'ny WordPressfampidirana mailakatatitra momba ny mailakamailakalasibatra amin'ny mailakafotoana emailworkflow mailakamailflowautomation marketingmombamomba ny mpandefatimezonesWordPressmailaka wordpresszapier